२०७५ असार ५ मंगलबार ०३:०९
असार ५,डडेल्धूरा ।।
वडा कार्यालयबाटै चाहिए अनुसारका योजना कार्यान्वयन हुन थालेपछि डडेल्धुराको आलिताल गाँउपालिकाका बासिन्दाह? स्थानीय सरकारबाटै गाँउ बस्तीको विकास हुनेमा आशावादी बन्न थालेका छन ।
चालु आर्थिक बर्षमा आलिताल गाँउपालिकाले सञ्चालन गरेका अधिकांस योजनाह? वडा कार्यालयबाट तर्जुमा गरिएका योजना हुन । गाँउपालिकाको बजेट वडा कार्यालयमा बिकेन्द्रित गर्ने लक्ष्य अनुसार गाँउपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको विकास बजेटको बढि हिस्सा वडा कार्यालयमा पठाएको हो ।
बडामा अधिकार प्रत्यायोजन र बिकेन्द्रिकरणका सवालमा आलिताल गाँउपालिकाले प्रदेश नं. ७ कै नमुना गाँउपालिकाका ?पमा आफुलाई स्थापित गरिसकेको आलिताल गाँउपालिका–७ का वडाध्यक्ष बिरबहादुर बोहराले बताए ।
वडा कार्यालयमा आबश्यक जनशक्ति अभावमा योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाई रहेको वडास्तरका जनप्रतिनिधीह? बताउछन । गाँउपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गरेका ३ सय २ भन्दा बढि योजना मध्ये अधिकांस बडास्तरबाटै तर्जुमा गरिएका योजना रहेको गाँउपालिकाका प्रावधिक राजबहादुर शाहले बताए । हरेक वडामा प्रावधिक जनशक्ती आबश्यक पर्ने भएपनि हाल ४ जना प्रावधिकले ८ ओटै वडामा सेवा दिईरहेको गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रसिँह ठगुन्नाले बताए ।
वडास्तरमा लेखा हेर्ने कर्मचारीको समेत अभाव रहेकाले हरेक योजनाको भुक्तानी गाँउपालिकाबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाँउपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गु?ङ बताउछन ।
विकेन्द्रीकरणका क्षेत्रमा गाँउपालिकालाई नमुना बनाउने योजनामा आफु रहेको बताउदै अध्यक्ष गु?ङले वडा कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिए मात्रै संघीयताको स्वाद आम नागरिकले चाख्न पाउने बताए । गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालयले गर्ने हरेक निर्णयमा वडा कार्यालयको सिफारिस र सहमती अनिवार्य बनाइएको र गाँउपालिकाका अधिकारह? बडामा प्रत्यायोजन गर्न आफु कटिबद्ध रहेको गु?ङले बताए ।
बडा कार्यालयह? जिम्मेवार हुने बित्तिक्कै गाँउपालिकाका सफल र सक्षम हुने बताउदै अध्यक्ष गु?ङले वडा कार्यालयह?लाई थप प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउनका लागि विशेष योजनाका साथ काम थालिएको जानकारी दिए । उनले गाँउपालिकाको दिर्घकालिन विकासको रणनीति तयारगरि ८ ओटै वडामा विकासका अवशर र सम्भावनाह?को खाका तयार पारेर श्रोत जुटाउदै परिवर्तनको प्रत्याभुती हुनेगरि काम गरिने बताए ।
वडा कार्यालयमा विनियोजित बजेटका कारण आम नागरिकले वडा कार्यालयबाट थुप्रै आबश्यकताह? परिपुर्ती गर्ने अवशर पाएको बताउदै आलिताल गाँउपालिका–७ का किसनसिँह धामीले भने,“वडा कार्यालयबाटै प्रयाप्त बजेट परिचालन गरिएपछि स्थानीयले सिँहदरबारका अधिकार गाँउ बस्तीमा पुगेको महसुष गरेका छन ।” उनले वडा कार्यालयबाट बिनियोजित बजेट प्रभावकारी ?पमा खर्च भएको र आम नागरिकको जिवनस्तरमै परिवर्तन आएको दाबीगरे ।
डडेल्धुरा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने आलिताल गाँउपालिकामा जस्तो वडामा बढि बजेट बिनियोजन गर्न सकेका छैनन् । आलिताल गाँउपालिकाले वडामा बढि बजेट परिचालन गरेपछि विकासमा जनसहभागिता बढदै गएको र वडा कार्यालयप्रति आम नागरिकले बढि अपेक्षा गर्न थालेको आलिताल गाँउपालिका–४ का वडाध्यक्ष चन्द्रदेव बोहराले बताए ।